MX Linux 19: Emeputara ụdị ohuru nke DEBIAN 10 | Site na Linux
N'oge ndị ọzọ anyị dere banyere ya «MX Linux» na Blog (Hụ ihe ndị gara aga). Na ihe ndia ka o meworo ka ayi mata, n'ihi na odi otu a rue taa akpa itie ke Portal DistroWatch. Otú ọ dị, ka anyị cheta nke ahụ «MX Linux» Ọ bụ GNU / Linux nkesa nke a mụrụ site na nkwado nke ndị mmepe na ndị ọrụ nke obodo ndị ọzọ, nke ahụ bụ, Mgbochi-X y MEPIS.
«MX Linux» pụtara ìhè n'etiti ọtụtụ, n'ihi na obodo ndị a etinyela aka na ngwa ọrụ ha kacha mma un GNU / Linux nkesa ìhè ma siri ike, e mere n'okpuru echiche nke inye a desktọọpụ mara mma ma rụọ ọrụ nke ọma na ntọala dị mfe, nkwụsi ike dị elu na arụmọrụ siri ike. Ihe a niile na nha onyogho ISO ka pere mpe maka nbudata, ojiji na nkenye dị mfe.
Nke a mara mma ma na-arụ ọrụ GNU / Linux nkesa nwere mmalite, dị ka DistroWatch si kwuo, Greek na North America (Gris / USA), site na mkpuru okwu «MX» a na-ekwenyekarị na o sitere na Mexico. Mgbe ọ dị n’ezie, ihe akwụkwọ ozi abụọ a pụtara bụ ihe emere jikọta leta nke mbụ nke MEPIS na akwụkwọ ozi ikpeazụ ya AntiX, si otú a gosipụta mmekota n'etiti ntọala 2 ya na obodo ndị na-emepe emepe.
Nke a kwekwara ka ọ dị esịne ke saịtị DistroWatch, dị ka nsụgharị nke mgbochi X, ma n'okpuru nke ya página dị ka a standalone nkesa na ntọhapụ nke MX Linux 16 mbụ beta ọha, November 2, 2016. Ruo taa, oru ngo a na «versión 19» oku «Patito Feo», nke anyị ga-eji nkenke kọwaa ma emechaa. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere «MX Linux» ị nwere ike ịga na nke gị ukara website na-ahụ niile ukara ọmụma dị na budata ISO ya.
1 MX Linux 19: jọgburu onwe ya Duckling
1.1 Mpụga ngwa mmelite
1.2 MX nke ngwa emelitere
1.3 AntiX nke ngwa emelitere
1.4 Dị iche iche
MX Linux 19: jọgburu onwe ya Duckling
Dị ka ukara website nke «MX Linux», nke a «versión 19» o «Patito Feo» O nwere njirimara ndị a, arụmọrụ na mmemme:
Mpụga ngwa mmelite
Ebe nchekwa: Gụnyere ndị maka DEBIAN 10.1 (Buster), AntiX na MX Linux.
Desktọpụ Environment: Xfce 4.14
Editọ imagen: GIMP 2.10.12
Liblọ ọba akwụkwọ vidiyo: Isiokwu 18.3.6
Femụwe: Mmelite dị iche iche.
kernel: Xdị 4.19
Nchọgharị: Firefox 69
Ngwaegwu vidio: VLC 3.0.8
Onye njikwa egwu (Onye egwu): Clementine 1.3.1
Onye Ahịa Email: 60.9.0 Thunderbird
Office Suite: LibreOffice 6.1.5 (Na iche nche nche ha)
Ngwa ndị ọzọ: Emelitere site na DEBIAN na MX Linux Repositories dị.
MX nke ngwa emelitere
Nrụnye: Dabere na Gazelle Installer (Gazelle), agbakwunye mkpa dị mkpa maka njikwa nke usoro nkwụnye ego na nkewa.
Bọchị na Oge: Mgbanwe ndị na-akwado ịrụ ọrụ nke ihe elekere na sistemụ sistemụ.
Nhazi USB: Ngwa maka ijikwa ihe nhazi usoro ihe nchekwa USB.
Ngwunye ngwugwu: Ugbu a gụnyere ngosipụta nke akara ngosi maka ngwa Flatpak. Na mgbakwunye, mmelite LibreOffice dị site na DEBIAN Backports Repositories.
Mata: Ngwugwu maka izipu ozi mberede na ndị ọrụ sistemụ.
Mmelite: Ọ naghị achọzi paswọọdụ nchịkwa ka ịlele maka mmelite na-echere kama ọ ka chọrọ itinye ha.
Na akwụkwọ ahụ aja: Gụnyere ego ọhụụ.
Nhazi nhazi (Bash-config): Ihe omuma ohuru raara onwe ha nye iji meziwanye ihe ngosi nke gburugburu bash na njikwa nke utu aha na ya.
Buut-mmezi: Emelitere iji kwado (dozie) ọnọdụ kachasị dị iche iche nke emebi emebi.
Isiokwu Desktọpụ: Gụnyere isiokwu nke ọhụrụ.
Mgbanwe dị iche iche: Obere mmelite na ihe ndị ọzọ MX Linux nwere Ngwaọrụ, ntinye nke ọtụtụ faịlụ enyemaka na onyonyo ISO, emelitere Ajụjụ nhọrọ na ntụgharị ntụgharị.
AntiX nke ngwa emelitere
Ndụ AntiX System na-adị ndụ, gụnyere ụfọdụ ntọala vidiyo.
Ozi ederede dabere na mmalite buut ntinye.
Fixes na "mma" video mmalite mode larịị na ndụ buut menu.
Mpaghara nkwado mmezi: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa MX niile nwere mmelite ntụgharị.
Dị ka anyị pụrụ ịhụ «MX Linux» bụ GNU / Linux Nkesa na-enye ọtụtụ atụmatụ na akụrụngwa ọhụrụ na Community User. Ma ọ bụ «versión 19» oku «Patito Feo», ọ bụ nnukwu itu ukwu si aga version, ebe ọ bụ na ọ na-ewetara anyị isi nke DEBIAN-10 maka ogologo mgbanwe na mmelite na ya. Ee, ha na-eji ma ọ bụ na-achọ iji «MX Linux», anyị na-akwado ndị a dị iche iche nke telegram banyere ya ka ha nwee ike isonye ma kesaa ahụmịhe n'akụkụ a: MX in Spanish, MX Linux & AntiX Spanish y Tic Tac Project.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » MX Linux 19: Emeputara ụdị ohuru nke dabeere na DEBIAN 10
Chrome 78 na-abịa na DNS karịrị HTTPS, nhazi onyonyo nzụlite na ndị ọzọ
Ubuntu Touch OTA-11 rutere na ndozi maka keyboard na ihuenyo na ndị ọzọ